Ihe mkpuchi komputa → Ihe mkpuchi komputa / uwe P&M
Ihe mkpuchi kọmpụta bụ otu n'ime ụzọ kachasị amata akara akwa na akwa. Ọ bụ n'ihi akụkọ ihe mere eme ya kemgbe ọtụtụ narị afọ, ebe n'oge ochie ụmụ nwanyị na-eji akwa aka eji aka.
N'oge a, a na-etinye ihe mkpuchi akpaaka na-akpaghị aka site na iji igwe na-achịkwa kọmputa na ndabere nke usoro ihe eji arụ ọrụ, nke emere n'otu n'otu maka ụdị eserese ọ bụla.
Obere atụmatụ na textiles nwere ibu karịa nke t-uwe ọdịnala mara mma kacha mma. Uwe mara mma nwere ọtụtụ elele. Ngwaahịa dị otú a na-apụta site na asọmpi ahụ, na-eme ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ sie ike ma na-ewulite echiche nke obodo n'etiti otu egwuregwu n'ihe banyere uwe ọrụ.
A na-eme ihe mkpuchi kọmpụta na uwe na akwa
Enwere ike iji ihe eji arụ ọrụ kọmputa rụọ ọrụ nke ngwa ngwa uwe mgbasa ozi. Akara ngosi aha na ụlọ ọrụ na polówkach, akpa ma ọ bụ nhicha ahụ nwere ike ibu ezigbo onyinye nye ndi ahia ma obu ndi ahia. Site n'iji uwe dị otú ahụ ma ọ bụ ngwaahịa mgbasa ozi, ha ga-akwalite ụdị ahụ.
Na mgbakwunye na uwe, a na-emekarị ihe mkpuchi na ngwaahịa dịka akpa, okpu, akwa nhicha ahụ na akwa mmiri. Akara ejiri kpuchie nke ọma ejiri ike sie ike ma na-eguzogide ọgwụ karịa usoro ndị ọzọ eji akara na eserese.
Omenala nke ịkpụzi kọmputa
Risonga mkpọrọ bụ usoro ochicho mma nke amara n’oge ochie, mgbe ụmụnwanyị ejiri aka kpara uwe, akwa akwa na ọkọlọtọ. Dị mma na ogologo oge nke ịcha akwa emeela ka ha bụrụ akụkụ nke ọtụtụ ọdịnala, yana akara nke mpaghara ụfọdụ n'ụdị uwe ndị mmadụ na ọkọlọtọ.
Ọdịdị dị mma nke akara aka na ịdịte aka nke akara achọpụtakwala ngwa na mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ. A na-ahụkarị ndị ọrụ na-eyi uwe nwere akara ụlọ ọrụ dịka ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị a tụkwasịrị obi na ndị a na-amaghị aha. Nakwa akwa textiles n'ụdị akwa nhicha ma ọ bụ akwa mmiri nwere akara ngosi na-eme ka nkwari akụ nwee ugwu.
A na-ahụkwa ndị na-echere na ndị ụlọ oriri na ọ equippedụ equippedụ nwere ngwa ngwa nke gastronomic dịka apron ma ọ bụ apron dị ka nke kwekọrọ na ika ahụ, wee si otú a mee ka ntụkwasị obi ka ukwuu, nke na-atụgharịkarị n'ime mkpebi ịzụta ndị ahịa. Embroidery bu kwa ngwa mgbasa ozi nke anatara.
Ngwa eji achọ mma n'ụdị akpa, okpu, T-shirts ka a na-ejikarị asọmpi nke ụlọ ọrụ haziri dịka akụkụ nke nkwalite ya ma ọ bụ dị ka freebies maka ndị ahịa.
Ogige igwe maka ihe ịchọ mma kọmputa
Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ na ohere ndị dị ugbu a na-enye anyị ohere igbo mkpa na-eto eto maka ngwaahịa na ịcha mma. Ekele maka igwe nke oge a, taa ọ ga - ekwe omume ịme ọtụtụ puku embroidery na obere oge ma na-enwe nkenke nke nhazi ahụ. Ọganihu akụ na ụba a sụgharịrị ịbụ ọnụahịa mara mma maka ịkwa akwa.
Ihe omuma nke komputa - teknụzụ anyi nwere
Igwe ọgbara ọhụụ nwere otutu agịga nke ekwesịrị ijikọta agba agba. A na-eji usoro kọmputa arụ ọrụ nke ihe eji arụ ọrụ. Ọ dị n'akụkụ anyị iji chọpụta ebe kwesịrị ekwesị itinye akwa mkpuchi na nha ya. Embroidery ka akwadoro maka oru pere mpe, ya mere ama ama ya maka ibipụta logos, aha ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ akwụkwọ.
Uru na ọghọm dị na ịkpaaka kọmputa
Ọdịdị nke uwe nwere ihe nnọchianya bụ ihe na-eme ka ọ pụta ìhè. Emere ya nke ọma na-enye textiles ụdị mma na ịdị mma ọhụụ, akara nke ọ kpọsara ọ na-enweta ugwu. Enweghị mkpa iche na eserese ma ọ bụ ederede ga-apụ na ịsa ma ọ bụ mgbe ogologo oge ojiji.
Ihe nkedo ihe eji eme komputa bu ihe di nkpa nke uwe, nke n’enye ya oke uzo karie uzo ozo ndi na agbapu ma obu meputa oghere site na iji nwayọọ nwayọọ. Ihe nkedo ihe eji eme komputa nwere ike inwe ihe obula. Naanị njedebe bụ agba nke eri ejiri.
Embroidering a rụrụ na ịwa ahụ nkenke ekele kọmputa akara. Usoro na nkenke nke ihe mkpuchi kọmputa na-enye ohere maka mkpebi dị elu nke usoro ejiji. Embroidery na-akwụ ụgwọ site na nnukwu mpịakọta.
Uru ọzọ bụ ụgwọ otu oge iji kwadebe usoro ihe omume, nke na-adịgide na nchekwa data anyị maka ọdịmma. Ya mere, n'ọdịnihu, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ alọghachi na-etinye uwe na otu ụdị ahụ, a ga-agụpụ ya na ego mmemme ahụ.
Ihe mkpuchi kọmpụta nwekwara ọghọm, mana enwere ike izere ya site na ịhọrọ usoro akara kwesịrị ekwesị maka ụdị ihe na imewe. Nke a bụ ihe kpatara na ọ ga - adị mma ịkpọtụrụ ndị ọkachamara tupu ị nye ọrụ akara mbụ gị iji zere ntụpọ.
N'adịghị ka mbipụta kọmputa zuru oke, ịcha mma enweghị ike iji ịkwanye eserese zuru oke na agba na-enweghị njedebe.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe ọ bụ maka. Ihe ịchọ mma bụ ihe na-ezo aka na ọdịnala n'ihi na ọ dị ka uwe mkpuchi nke na-achọ uwe mara mma. O nweghi ihe jikọrọ ya na kitschy, ihe osise ndị a na-asacha.
Achọghị ịcha mma na ihe eji akwa gramage na-agaghị agafe 190 g / m2. Nnukwu ihe nkedo ga-enye echiche nke "ọta", ọ ga-abụ nke a na-agbanwe agbanwe n'oge eji ya, yana mgbe etinyere ya na ihe dị gịrịgịrị - agịga nwere ike ịkpọpu ụdị ihe ahụ dị gịrịgịrị.
Enweghi ike itinye ihe nkedo kọmputa na akwa ovu di obere nke idi obere ya. Echere na gram nke textiles kwesiri kariri 190 g / m2. Agbanyeghị, ọ na-esiri ike ichetụ n'egogogogogogo na uwe elu na-adịghị ala ala nke na ihe niile na-egosi site na ya.
Ego ole ka ihe mkpuchi kọmputa dị?
Ihe nkedo kọmputa dịtụ aku. Otú ọ dị, ọtụtụ ihe na-ekere òkè n'echiche ziri ezi. Roidkọ mma dị ọnụ ala karịa ịtụ ahịa karịa. Tụkwasị na nke ahụ, oke nkedo na mgbagwoju anya nke ndịna-emeputa nwere mmetụta dị ukwuu na ọnụahịa ahụ, nke sụgharịrị ịbụ ọnụahịa nke njupụta ịchọ mma. Nnukwu ihe mkpuchi ahụ, ka ọtụtụ folds, njikọta na ibu ya buru ibu, otú ahụ ka akwa ahụ na-ebuwanye ibu. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ nke ebe a ga-etinye ihe mkpuchi ahụ (dịka akara ngosi n'ihu na igbe aka ekpe + akara dị n'etiti azụ) dị mkpa maka ọnụahịa otu. Ọnụahịa ahụ anaghị enwekarị mmetụta site na ọnụọgụ nke agba agba, ebe igwe akwa nwere ọtụtụ eri. Ego nke nkwadebe kwesiri itinye ya na usoro okike mbu mmemme embroiderynke dịrịị na nchekwa data anyị ma si otu ahụ agbakwunye na iwu ndị ọzọ.
ihe mkpuchi kọmputaIhe mkpuchi na uweT-uwe elu na akwa akwaT-uwe elu na logoUwe nwere logouwe e derePoloakara akara mkpuchi na T-shirtsUwe eji eji ejiji eji eji ejiji